အာဏာသိမ်းတာ ပျော်စရာလားဗျာ ~ .
9:30:00 AM ဆောင်းပါး No comments
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ စစ်တပ် ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီတဲ့ဗျ။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ။ ကျုပ်တုိ့ရွှေပြည်ကြီးအစိုးရက အာဆီယံမှာ ဥက္ကဋ္ဌဒုလ္လဘတက်ဖြစ်တဲ့နှစ်ကျမှ အာဆီယံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းတဲ့အမှုက တက်ရတယ်လို့။ နောက်ပြီး တစ်ခါဒီသတင်းကြားတဲ့အခါ ကျုပ်ဖြင့်ကြက်သီးမွေးညင်းလည်းထသဗျ။ မထခံနိုင်မလားဗျာ။ ထိုင်းနဲ့မြန်မာက အိမ်နီးချင်းမဟုတ်လား။ တော်ကြာအတုမြင်အတတ်သင်ဆိုတာလို သူများတွေတောင် အာဏာသိမ်းနေတာတို့များ တစ်ခေါက် တစ်ခါအာဏာပြန်သိမ်းဦးမဟလို့ ကျုပ်တို့ဆီကတပ်မတော်ရဲ့ ကြီးကြီးမာစတာများက စိတ်ပြန်လည်သွားကြရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်မတုံး။
ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေထဲမှာ လည်း တချို့သူများဟာ ခပ်ဆန်း ဆန်းရယ်ခင်ဗျ။ ထိုင်းမှာစစ်တပ် ကအာဏာမသိမ်းခင် နှစ်ရက် အလိုမှာ မာရှယ်လောဆိုတဲ့စစ် အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကို ထုတ်လိုက် တာ ကိုယ့်လူတို့လည်းသတိထား မိမှာပေါ့။ အဲဒီအခါတုန်းက ကျုပ် တို့ဆီက တချို့သောမောင်များ ကဆိုရှယ်မီဒီယာခေါ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ ချော်တောငေါ့နေတာတွေ့သမို့လား။ ထိုင်းမှာ စစ်တပ်က မာရှယ်လောထုတ်တာ ပျော်စရာကြီးပါတဲ့ဗျာ။
အောင်မယ် . . .စစ်အုပ်ချုပ် ရေးအမိန့်ထုတ်ပြီး ငြိမ်ဝပ်ပိပြား အောင်လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ထိုင်းတပ်မတော်သားတွေကိုလည်း ချီး ကျူးကြသေးခင်ဗျ။ သေနတ်ကြီး တကားကားနဲ့ ထိုင်းစစ်သားတွေ အကြားက ဖြတ်သွားကြတဲ့လှပျို ဖြူကလေးများရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို လည်း ပလူပျံအောင်ရှယ်ယာလုပ် ကြပါရဲ့။ ဒါတင်မက ဘွားတော် တချို့က ထိုင်းစစ်သားတွေကို ရေ ပူရေချမ်းကမ်းပြီး တပ်နဲ့ပြည်သူ ချစ်ကြည်ဖြူနေကြတဲ့ ဓာတ်ပုံများ ကိုကြည့်ပြီးသကာလ စစ်သားတွေကိုဝိုင်းပြီးထောမနာလိုက်ကြ တာ။
နောက်ပြီးတစ်ခါ ထိုင်းစစ် တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုနှိုင်းယှဉ် ချက်ထုတ်ကြသေးတယ်။ ထိုင်း တပ်မတော်ဟာ မြန်မာတပ်မ တော်လိုမဟုတ်ဘူး။ အာဏာ သိမ်းတယ်ဆိုရင်လည်း ခဏပဲ။ ပြီးရင် ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ပြီး အရပ်သားလက်ထဲကို အာဏာ ဝကွက်အပ်တာပဲတဲ့။ အဲ . . . ကျုပ်တို့ရဲ့တပ်မတော်ကြီးကတော့အာဏာတစ်ခါသိမ်းပြီးရင် တစ်သက်ပဲတဲ့ဗျာ။ ကျုပ်ဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်က မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပြီးသကာလ မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် မျက်နှာတောင်ပူတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ကို ပြောရက်လိုက်လေခြင်းပေါ့။ စစ်တပ်ချင်းတူတာတောင်မှ အသက်ရှူချင်းကွာသေးသဗျလို့လည်း သဘောပေါက်ရတယ်။
နို့ပေတဲ့ ကျားဆိုတဲ့အမျိုး ဟာ ဘယ်တောကကျားပဲဖြစ်ဖြစ် သက်သတ်လွတ်စားကြတာမှ မဟုတ်တာရယ်။ အလားတူစစ် တပ်ဆိုတာမျိုးဟာလည်း အဲသလိုပဲခင်ဗျ။ သူတို့ကိုဥပဒေနဲ့ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင်မချုပ်ကိုင်ထားနိုင်မချင်း ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို စစ်တပ်ဟာ အာဏာသိမ်းနိုင်ခြေရှိတာပဲဗျာ။ အထက်မှာ ကျုပ်တို့ဆိုခဲ့သလို ထိုင်းတပ်မတော်ကိုချီးမွမ်းထော မနာဝိုင်းပေးကြပြီးတဲ့နောက် ဘာမှမကြာလိုက်ပါဘူး။ နောက်တစ် ရက်လည်းနေရော ထိုင်းစစ်တပ် ဟာ နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်း ယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါရောလားဗျာ။
ကနဦးမှာ ထိုင်းစစ်တပ်ကို ဟိမဝန္တာ ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်ကြတဲ့ ကျုပ်တို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်က ဆွေ သဟာများလည်း အဲဒီသတင်း ကြားတဲ့အခါ ကြက်ကြီးလည်လိမ် ဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါ့။ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ ‘နင်’ကုန် ကြတယ်ဆိုရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ အနှီ သူတို့ဟာ ထိုင်းစစ်တပ်ကအာ ဏာသိမ်းပြီဆိုတော့ကာ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ကြတော့ဘူးခင်ဗျ။ ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့ကပြောနေရ တာ။ စစ်တပ်ကိုပုံပြီးမယုံပါနဲ့လို့။
ဆိုချင်တာကတော့ဗျာ။ စစ် တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီဆိုတာနဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အလုပ် ကိုလုပ်တော့တာပဲဗျ။ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ပထမဆုံးနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အရပ်ရပ်အခြေအနေကို ထိန်းလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ နေဝင်မီးငြိမ်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်တယ်။ ဒါနဲ့ ရပ်နေတာတင်မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဆင့်တက်ပြီး လတ်တလော အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကို ထိန်းသိမ်းတယ်။ လွှတ်တော်ဒါမှမဟုတ် ပါလီမန်ကို ဖျက်သိမ်းမယ်။ နောက်ပြီး စာနယ်ဇင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မယ်။ စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းဖော်နည်းကားဆိုပါစို့ရဲ့။
အခုထိုင်းမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲဗျာ။ ပထမတော့ လမ်း ပေါ်မှာမငြိမ်မသက်နဲ့လှုပ်လှုပ် ခတ်ခတ်ဖြစ်နေတာတွေကို ရပ် ရွာစိုးမိုးရေးအတွက် ထိန်းသိမ်း မယ့်ပုံနဲ့ မာရှယ်လောထုတ်လိုက် တယ်။ ပထမတော့ ကောင်းပြီ ကောင်းရဲ့လို့ သူတို့ဆီကလူထုက လည်း ထင်နေပုံပါပဲ။ ဒါကြောင့် လည်း ရေပူရေချမ်းကမ်းတာပေါ့။ သို့ပေတဲ့ နှစ်ရက်အကြာမှာ ဇာတိက ပြတော့တာကိုး။
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်း ကြောင်း ကြေညာလိုက်တယ်။ အာဏာသိမ်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်က လည်း သူ့ကိုယ်သူတော့ဖြင့် ဘာ တဲ့ဗျာ။ ယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဆိုလား ပဲ။ လူထုဆန္ဒမဲနဲ့တက်လာတဲ့ ယင်လပ်ရှင်နာဝပ်ဆိုတဲ့ အရပ် သားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ သူ့ရဲ့အပေါင်း ပါတွေကိုကျတော့ဖမ်းဟယ်ချုပ် ဟယ်လုပ်တယ်။ပြီးတော့ အထက်လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းတယ်ဗျာ။ စာနယ်ဇင်းတွေ၊ ရုပ်သံလိုင်းတချို့ ကိုလည်းဖြတ်တောက်တယ်။ သတင်းသမားတွေ သတင်းယူခွင့်ကိုကန့်သတ်တယ်။
ကျုပ်ဖြင့် သတင်းတွေထိုင် ကြည့်ရင်းနဲ့ စစ်သားတွေလက် နက်ကိုယ်စီနဲ့ နေးရှင်းသတင်းစာ တိုက်ထဲဝင်လာတဲ့ပုံတွေ့ရတော့ ရင်ထဲမှာမွန်းကျပ်ခံပြင်းရသဗျ။ သတင်းခန်းထဲ သေနတ်နဲ့ဝင်တာ ရိုင်းစိုင်းတယ်လို့လည်းခံစားရ တယ်။ စစ်သားတွေသေနတ် တကားကားနဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာ လမ်းသလားနေတာဟာ ဟောဒီ ရွှေပြည်ကြီးမှာ မမြင်ချင်မှအဆုံးရယ်ဟာ။ ဘယ့်နှာကြောင့် ကျုပ်ကတထူးတဆန်းလုပ်နေရသတုံးလို့ကိုယ့်လူတို့မေးလာရင်လည်း ခံရမှာပဲဗျာ။ ကျုပ်ကတော့ စစ်သားတွေ သေနတ်တပြပြနဲ့ အရပ်သားလူထုကို အမိန့်ပေးနေတာ လူအချင်းချင်းခံပြင်းတာတော့ အမှန်ဗျို့။
ကြားထဲကကျုပ်က ရွပိုးထိုး ပြီးမခံချင်ဖြစ်နေပေတဲ့ထိုင်းလူထု ကတော့ စစ်တပ်ရဲ့ဒီအချိုးကို ရိုး နေပြီထင်ပါရဲ့။ သိတော်မူကြတဲ့ အတိုင်း ထိုင်းစစ်တပ်က အာဏာ သိမ်းတာ ဒီတစ်ကြိမ်ပထမဆုံးမှ မဟုတ်တာ။ ဒါပါနဲ့ဆိုရင် ထိုင်း မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာ ၁၉ ကြိမ်တောင်ရှိပြီတဲ့ခင်ဗျ။ အဲ . . . ၁၂ ကြိမ်က အာဏာတကယ် သိမ်းတာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ခုနစ်ကြိမ် က စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဖို့ကြံ စည်ခဲ့တာဆိုပဲ။
ကျုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုပါပဲဗျာ။ ခဏပဲသိမ်းသိမ်း၊ အကြာကြီးပဲ သိမ်းသိမ်း ဒီမိုကရေစီစည်းမျဉ်း ကိုဖျက်ပြီး စစ်တပ်ကအာဏာ သိမ်းတယ်ဆိုတာ ယဉ်ကျေးတဲ့လူ သားကမ္ဘာကဘယ်သူမှလက်မခံ နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ အခု ဆိုရင် ထိုင်းမှာလည်း သူ့နိုင်ငံသား တွေဟာ စစ်အာဏာသိမ်းတာကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြသဗျ။ စစ်တပ်ကလည်း ဘယ်လောက်ပဲ သိမ်မွေ့ပါတယ်ပြောပြော လမ်း ပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတဲ့လူထုကို လက်မရွံ့တမ်း ဖမ်းဟယ်ဆီးဟယ်နဲ့နှိမ် နင်းတော်မူနေတာပဲခင်ဗျ။ အဲဒါ များထိုင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်း တာမဆိုးလှပါကလားဆိုပြီး အလံရှူးချင်ကြတဲ့သူများကလည်းရှိ သေးရဲ့။ သူ့နိုင်ငံသားများက လက်မခံနိုင်သလို ဒီမိုကရေစီကိုတန်ဖိုး ထားတဲ့နိုင်ငံများကလည်း ထိုင်းရဲ့အာဏာသိမ်းကိစ္စအပေါ်မှာ မကျေလည်ကြဘူးခင်ဗျ။ နိုင်ငံအများအပြားကခေါင်းဆောင်များက ကန့်ကွက်နေကြတယ်။ အမေရိကန်ဆိုရင် ထိုင်းကိုပေးစရာရှိတဲ့ အကူအညီများကိုတောင်မှ ရပ် ဆိုင်းလိုက်ပြီဗျ။ အဲ . . . အာဆီယံ မှာ ပူပူနွေးနွေးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ထားတဲ့ ကျုပ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးအစိုးရက တော့ ထိုင်းအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ် သက်ပြီး ဘာတစ်ခွန်းမှမဟသေး ဘူးခင်ဗျ။
အစမှာကျုပ်ပြောခဲ့သလို ပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့အစိုးရအာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နှစ်ကျမှ အာဏာ သိမ်းကိစ္စတွေပေါ်လာတာဟာကံ ဆိုးတယ်လို့။ ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်က လည်း စစ်တစ်ပိုင်းအစိုးရဖြစ်နေ လေတော့ ဒေသတွင်းမှာစစ်အာ ဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲဆိုတာ ကျုပ်တို့တင်မက နိုင်ငံတကာက လည်းစောင့်ကြည့်နေတာဗျ။ ဒါ ကြောင့်ခွတော့ဖြင့်ခပ်ကျကျရယ်။
အကယ်၍များ ထိုင်းမှာစစ် တပ်က အာဏာသိမ်းတာဟာ မကောင်းပါလို့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးကတက် ထောင်မောင်းနင်း ကန့်ကွက်ခြင်း ပြုမယ်ဆိုရင်လည်း တခြားသူ တွေအပထား၊ ထိုင်းစစ်တပ်ကိုယ် တိုင်က ဥက္ကဋ္ဌအစိုးရကို ပြန်ပြီး လက်ညှိုးထိုးလာလိမ့်မယ်။
သူများကို အာဏာသိမ်းတာမကောင်းဘူးပြောရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယ်လည်းပြန်ကြည့်ပါဦးဗျာလို့ ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေက စကားနာထိုးလာနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုမဟုတ်လို့ထိုင်းမှာ စစ်အာဏာသိမ်းတာ ကောင်းတယ်ဗျာလို့ထောက်ခံလိုက်ရင်လည်း နိုင်ငံတကာကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကပါ အလိုတူအလိုပါဆိုပြီး ယိုးစွပ်တာကိုလည်းခံရဖွယ်ရှိတယ်။
လူဆိုတာကလည်း သူများ ကိုစောဒနာဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် က အကျင့်စရဏကောင်းမွန်မှ ဖြစ်တာမို့လားဗျာ။ အခုအချိန်မှာ ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကလည်း မနည်း သိက္ခာဆည်နေရရှာတာကလား။ ဒါကြောင့်မို့ ထိုင်းမှာအာဏာသိမ်း တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျုပ်တို့ရဲ့ ရွှေပြည်ကြီးအစိုးရပူပူနွေးနွေး အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာ ဘယ်လိုရပ် တည်ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ စိတ် ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာနေပြီဗျ။ အတည်မပြုနိုင်ပေတဲ့အရပ်ထဲမှာ တိုးတိုးသဲ့သဲ့ကြားတာကတော့ မြန်မာအစိုးရဟာ ထိုင်းစစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာကို ထောက်ခံ တယ်ဆိုလားပဲ။ ပြောခွင့်ရသူကြီး ကတော့ ဘာတစ်ခုမှအစိုးရမှာ ထုတ်ပြန်ပြောဖို့ရာမရှိသေးပါဘူး တဲ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌဟာ ထိုင်းအာဏာသိမ်းကိစ္စ မှာ နှာခေါင်းကျည်ပွေ့မတွေ့ပါ စေနဲ့လို့ပဲ ကျုပ်တို့ကဆုတောင်း ပါသဗျ။ ပြောသာပြောရတာပါ။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးဟာ ထိုင်းမှာခဏခဏ အာဏာသိမ်းနေတဲ့ မလိမ်မိုး မလိမ်မာလေးတွေကို နေပြည် တော်ခေါ်ပြီး ရွှေပြည်ကြီးကနည်း လမ်းတွေ သင်တန်းပေးနေရင် လည်းအခက်။ သိတယ်ဟုတ်။ ရွှေပြည်ကြီးရဲ့နည်းက ထိုင်းမှာ လိုစစ်တပ်က အာဏာမကြာခဏ သိမ်းနေစရာမလိုဘူး။ ခဏခဏ အာဏာသိမ်းစရာမလိုဘဲနဲ့ ရာ သက်ပန်အာဏာမြဲနေစေရမယ့် နည်းက ရွှေပြည်ကြီးရဲ့မူပိုင်ဖော် မြူလာ။ သိချင်ရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံထဲမှာရှာ။
ထိုင်းကဗိုလ်ချုပ်တွေက ကျုပ်တို့ဆီက ကြီးကြီးမာစတာ များ နဲ့ယှဉ်ရင် နုပါသေးတယ်။ အာ ဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာ အပျော် လုပ်စရာများမှတ်နေလားမသိဘူး။ ခဏခဏသိမ်းတော့ ခဏခဏ စစ်တပ်နာမည်ပျက်တာပေါ့။ ဘာလုပ်မှာလဲ။ ကျုပ်တို့ဆီမှာဆိုရင် တစ်ခါသိမ်းလိုက်တာ နှစ်(၆၀) လောက်ကြာတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်းနဲ့မြန်မာဟာ အာဏာသိမ်း အစဉ်အလာမှာတူပေတဲ့ သမ္ဘာ မှာတော့ကွာတယ်ဗျ။ အာဏာ သိမ်းရာမှာ ကျုပ်တို့ကဆရာပဲ။ သို့ပေတဲ့ အခုတော့ အရင်လို မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ထိုင်းနဲ့ကွာ သွားတာက ကျုပ်တုိ့ဆီမှာ စည်း ကမ်းဥပဒေကို တပ်မတော်ဟာ ဘယ်လောက်အလေးထားလာပြီ လဲဆို အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုရင် တောင် နည်းဥပဒေတွေဘာတွေ နဲ့။
(ဖော်ပြပါ သရော်စာသည် စာရေးသူ ဘစီ၏ အာဘော်သာဖြစ်သည်)